Banyere Anyị - Zhangzhou Anwụ na-acha Ifuru Bubata Na Export Co., Ltd.
Kedu ka anyị si malite mmalite anyị?
Na 2008, ndị na-eto eto abụọ gụsịrị akwụkwọ na mahadum, Cassie & Jack, batara na ụlọ ọrụ azụmahịa nke mba ọzọ nke ahịhịa akụ n'ihi ịhụnanya ha maka okooko osisi. Ha gara n'ihu ịmụ ihe ma rụsie ọrụ ike, ha wee nweta ahụmịhe bara uru, afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, ha malitere njem azụmaahịa nke aka ha.
Na 2010, Ha malitere imekorita ya na ulo akwukwo nke di na Shaxi Town, Zhangzhou City, nke n’emeputa otutu osisi banyan, dika Ficus ginseng, Ficus S udi na osisi Ficus maka odida obodo.
Na 2013, A gbakwunyere mmekorita ya na ulo akwukwo ndi ozo, nke di na obodo Haiyan nke obodo Taishan, ebe bu ebe a kacha mara amara na-eto ma na-edozi Dracaena Sanderiana (uzo ma obu achara, ogwu achara, ngwo achara, wdg)
Ha na-achịkwa àgwà ahụ ma na-enye ndị ahịa echiche na-enye echiche, nke meriri ntụkwasị obi nke ọtụtụ ndị ahịa.
Na 2016,Zhangzhou Anwụ na-acha Ifuru Flower Import na Export Co., Ltd. e debanyere aha ma guzosie ike. N'ihi na ndị ọzọ ọkachamara ndụmọdụ, magburu onwe ya mma, asọmpi price na-echebara ọrụ, ọ enweta nkwanye a aha ọma n'etiti ndị ahịa.
Na 2020, E guzobere ụlọ akwụkwọ ọta akara ọzọ. Thelọ Nursery dị na Baihua villeage, Jiuhu Town Zhangzhou City, ebe bụ ebe a kacha mara amara dịgasị iche iche na China. Ọ dịkwa mma ihu igwe na ọnọdụ dị mma - naanị otu elekere site na ọdụ ụgbọ mmiri Xiamen na ọdụ ụgbọ elu. Lọ akwụkwọ ọta akara na-ekpuchi mpaghara nke 16 acres ma kwadebere ya na usoro njikwa okpomọkụ yana usoro ịgba ọkụ na-akpaghị aka, ọ na-enyere aka ịga n'ihu izute iwu ndị ahịa.
Ugbu a, Zhangzhou Anwụ na-acha Ifuru Import na Export Co., Ltd. aghọwo ọkachamara na ụlọ ọrụ a. Ọ bụ ọkachamara na mmepụta na ire ere nke ahịhịa na okooko osisi, gụnyere Ficus Microcarpa, Sansevieria, Cactus, Bougaivillea, Pachira Macrocrpa, Cycas, wdg. A na-ere osisi ndị ahụ na mba dị iche iche n'ụwa, dịka Netherlands, Italy, Germany, Turkey na mba etiti ọwụwa anyanwụ.
Anyị kwenyere na iji mgbalị anyị na-aga n'ihu, ndị ahịa anyị na anyị ga-enwe ike mmeri-mmeri oge niile.
Mmadụ Bịa na ileta anyị na anyị na-akwalite.